लिबियाका आप्रवासी बन्दीगृह बन्द गर्न आग्रह
एजेन्सी । शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय -युएनएचसिआर- ले अवैध आप्रवासीलाई नजरबन्द गर्न लिबियामा खोलिएका बन्दीगृहहरु बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । विस्तृतमा
दाजु फेल खाएपछि बहिनीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी
घर भत्किदा १४ जनाको मृत्यु
‘बेड सीट’ कहिले धुनु भयो ? अबदेखि माइक्रो चिपले बताउँनेछ
बैङ्कक । थाइल्याण्डमा आइतबार विहानैदेखि ठूलो भिडभाडका साथ देशभरी नमुना मतदान जारी रहेको छ ।
बाढीमा परी इन्डोनेसियामा ६३ जनाको मृत्यु
जाकार्ता । इन्डोनेसियामा शनिबार राती आएको बाढी पहिरोमा परी कम्तीमा ६३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिका किन समृद्ध राष्ट्र ?
सन् २००७ को अन्त्य तथा सन् २००८ को सुरुवातबाट सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अहिले ओझेलमा परिसकेको छ । अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक संकटले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठूलो उतारचढावको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
क्राइस्टचर्च मस्जिद आक्रमणः मुख्य आरोपीलाई अदालतमा पेश गरियो
क्राइस्टचर्च । न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चमा शुक्रवार ४९ जनाको हत्या भएको मस्जिद आक्रमणका मुख्य आरोपीलाई शनिवार अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
राहुलले ‘चौकीदार चोर भयो’ भनिरहँदा मोदीले सुरु गरे “म पनि चौकीदार” अभियान
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)को “म पनि चौकीदार” अभियानको शनिबार सुरुवात गरेका छन् ।
चुनाव अगाडिको राजनीतिः काँग्रेस प्रवेश गरेको तीन दिनमै नेता चौरसियाको हत्या
मध्यप्रदेश । इन्डियन काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेको तीन दिनमै भारतमा एक जना नेताको हत्या भएको छ भने उनका छोरा घाइते भएका छन् ।
काङ्ग्रेसको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरे
वासिङ्टन । अमेरिकी कङ्ग्रेसले मेक्सिको सीमामा मानवीय सङ्कटकाल लगाएर भएपनि सीमामा पर्खाल निर्माण गरिछाड्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै कङ्ग्रेसको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेका छन् ।
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र करिब सात अर्ब ८० करोड डलर खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले दक्षिणी सिमानामा पर्खाल बनाउनको लागि रकमको जोहो गर्न राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको राष्ट्रिय संकटकाल उल्ट्याउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
न्युजिल्यान्ड मस्जिद आक्रमण, विश्वभरबाट कसले के भने ?
न्युजिल्यान्ड । इुजिल्यान्डको क्राश्चिर्चस्थित एउटा मस्जिदमा आतङ्ककारी समूहले शुक्रबार गराएको विस्फोटको घटनाप्रति विश्वभरबाट विरोध भएको छ ।
तपाईको नाक कस्तो आकारको छ ?
यस्तो रहेको छ बुधबारको तपाईको भाग्य– साउन एक गते
एउटा कुखुराले २४ घण्टामा ३६ वटा अण्डा पारेपछि...